३५ घर मुसहर समुदायलाई आवास निर्माणका लागि चौंथो किस्ता ३३ हजारका दर वितरण -
३५ घर मुसहर समुदायलाई आवास निर्माणका लागि चौंथो किस्ता ३३ हजारका दर वितरण
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६ समय: १०:४९:०३
झुम्का, नविन कुमार चौधरी, मंसिर २०
रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ३ पिप्राहा स्थित ३५ घर मुसहर समुदायलाई आवास निर्माणका लागि आज ३३ हजार रुपैया रकमको दरले वितरण गरिएको छ । वडा सदस्य नारायण श्रेष्ठ र आवास निर्माण समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र ऋषिदेवले एक कार्यक्रम विच रकम हस्तान्त्रण गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय काठमाडौंले दलितका लागि १ परिवार १ घर अभियान वि. सं. २०७३ सालमा शुरु गरिएको हो । सोही अन्तर्गत यहाँ रहेको ३५ घरपरिवारका लागि पक्की आवास निर्माण कार्य शुरु गरेका थिए । भवन निर्माण सिलान्यास रामधुनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जयप्रकास चौधरी र शहरी विकासका डि.ई. श्याम कुमार सिंहले संयूक्त रुपमा गरेका थिए ।
वडा सदस्य श्रेष्ठका अनुसार पहिलो किस्ता ८५ हजार ५००, दोश्रो किस्ता ९९ हजार, तेश्रो किस्ता १ लाख १६ हजार र चौंथो किस्ता ३३ हजार गरी जम्मा ३ लाख ३३ हजार ५०० रकम सम्बन्धित परिवारलाई बुझाएको हो ।
परापूर्वकालदेखी यहा सडकको छेउमा रहेको ऐलानी जग्गामा बसोवास रहेको मुसहर बस्तीमा प्रत्येक परिवारकालागि २ कोठे पक्की भवन निर्माण गरिएको छ । घर निर्माणका लागि नगद पाएपछि आफैंले काम गर्दा बलियो घर बनेकोले प्राकृतिक विपदको जोखिमबाट सुरक्षित भएको दिपलाल ऋषिदेवले बताए । यहा फुसको घर रहेकोमा अहिले सबै मुसहर परिवारले पक्की घर पाए पछि खुशी भएका छन् । यहा करिव ४०० जनसंख्या रहेको यो समुदायका सबै मज्दुरी गर्छन । उनिहरुको नाममा जग्गा जमिन पनि छैनन् । सुकुम्बासी बस्तीमा प्रत्येक वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने परालको छाना भएको घरमा यीनिहरु बस्दै आएका थिए । यस ठाउँमा ३ पुस्तादेखी बस्तै आएका बौकाइ ऋषिदेवले घर विहिन अवस्थामा जिवन विताइरहेको अवस्थामा सरकारले पक्की घर उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।